Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fitakiana vaksiny vaovao any Canada
Ny Governemantan'i Canada dia manolo-tena amin'ny fitandroana ny sehatry ny fitaterana, ao anatin'izany ny mpiasa sy ny mpandeha mba ho azo antoka sy azo antoka. Ny vaksiny no fiarovana tsara indrindra amin'ny COVID-19 sy ny karazany hafa. Izany no antony tsy maintsy hanaovana vaksiny amin'ny COVID-19 ny mpiasa sy ny mpandeha amin'ny sehatry ny rivotra sy ny lalamby fehezin'ny federaly.
Fitakiana manomboka ny 30 Oktobra
Araka ny nambaran'ny Governemanta Canada tamin'ny 13 aogositra, ny mpandeha amin'ny sehatry ny rivotra sy ny lalamby fehezin'ny federaly dia mila vaksiny amin'ny COVID-19. Taorian'ny fifampidinihana lalina, ny Transport Canada dia namoaka ny baiko farany sy ny torolàlana ho an'ny zotram-piaramanidina sy ny lalamby mba hampiharana ny fepetra takian'ny vaksiny ho an'ny mpandeha izay mahomby amin'ny 3 ora maraina (EDT) 30 Oktobra 2021. Ny fepetra takian'ny vaksiny dia mihatra amin'ny mpandeha rehetra 12 taona miampy. efa-bolana izay:
• Mpandeha an'habakabaka mandeha amin'ny sidina an-trano, miampita sisintany, na iraisam-pirenena miainga amin'ny seranam-piaramanidina sasany any Canada; SY
• Ny mpandeha an-dalamby amin'ny fiaran-dalamby VIA Rail sy Rocky Mountaineer.
Ny mpandeha dia mila mampiseho zotram-piaramanidina sy lalamby porofo momba ny vaksiny. Mandritra ny vanim-potoana tetezamita fohy hatramin'ny 29 Novambra 2021, ny mpandeha dia manana safidy hampiseho porofo momba ny fitsapana molekiola COVID-19 manan-kery mba hidirana. Ny zotram-piaramanidina sy ny lalamby dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny satan'ny fanaovana vaksiny ny mpandeha. Amin'ny fomba fiaramanidina, ny Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) dia hanohana ireo mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny sata vaksiny.
Vitsy dia vitsy ny maningana ho an'ny hamehana sy trano fonenana manokana ho an'ireo vondrom-piarahamonina lavitra voatondro mba hahafahan'ny mponina manohy miditra amin'ny serivisy ilaina.
Ny fepetra takiana dia manomboka ny 30 Novambra
Hatramin'ny 30 Novambra, tsy ekena intsony ny fitiliana molekiola COVID-19 ratsy ho solon'ny vaksiny. Raha toa ka mbola tsy nanomboka ny fanaovana vaksiny ny mpandeha, na tsy manomboka haingana dia haingana, dia tsy mahazo mandeha izy ireo manomboka ny 30 Novambra. Hisy fanampim-panazavana homena amin'ny herinandro ho avy.
Ankoatr'izay dia hisy ny fepetra tetezamita ho an'ireo teratany vahiny tsy vita vaksiny izay mipetraka any ivelan'i Kanada ary niditra tao Canada talohan'ny 30 Oktobra. Hatramin'ny 28 Febroary, dia afaka manao sidina izy ireo amin'ny fiaingana any Canada raha toa ka manaporofo izany fitsapana molekiola COVID-19 manan-kery amin'ny fotoana dia.
Ny Governemanta Kanada dia hanohy hifanerasera amin'ireo mpandray anjara fototra, mpampiasa, zotram-piaramanidina sy lalamby, mpiasan'ny fifampiraharahana, Vazimba teratany, manampahefana eo an-toerana, ary faritany sy faritany hanohanana ny fampiharana ny fepetra takian'ny vaksiny.